IPad Pro miaraka amin'ny famandrihana tsy misy tariby dia ho tonga amin'ny 2022 | Vaovao IPhone
Luis Padilla | | iPad Pro, About us
Araka ny voalazan'i Bloomberg amin'ny taona ho avy dia hisy iPad Pro vaovao ho avy miaraka amin'ny vera miverina sy ny famandrihana tsy misy tariby, samy hamerenana na hamerenana ireo kojakoja hafa.
Ny taona 2022 dia afaka mitondra antsika iPad Pro vaovao misy vera indray. Ity fanovana fitaovana ity, izay efa nentin'ny iPhone nandritra ny taona vitsivitsy, dia hazavaina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny famandrihana tsy misy tariby eo amin'ireo endriny. Tsy vitan'ny hoe afaka mamerina ny iPad Pro tsy misy tariby fotsiny isika, fa afaka manao ihany koa Azontsika atao koa ny mampiasa azy io ho toy ny base charge ho an'ny fitaovana hafa, noho ny famerenana amin'ny laoniny. Ity fampiasa ity dia efa naely ho an'ny iPhone imbetsaka, saingy tsy nampiharina mihitsy. IPad Pro miaraka amina bateria lehibe kokoa dia toa misy dikany kokoa fa afaka mizara ny fiampangany amin'ny fitaovana hafa izy fa tsy iPhone misy bateria voafetra kokoa.
Ny fisalasalana aterak'ity fampidirana ny famandrihana tsy misy tariby ho an'ny iPad ity dia maromaro. Ny voalohany dia recharging fotoana amin'ny fampiasana Wireless famandrihana. Ny batterin'ny iPad Pro dia lehibe kokoa noho ny an'ny iPhone, ka raha miadana kokoa ny famandrihana tsy misy tariby amin'ny iPhone noho ny amin'ny alàlan'ny tariby, amin'ny iPad Pro dia azonao atao ny mamantatra hoe hafiriana no mety hahavitana azy. Ny fanontaniana faharoa dia ny karazana charger tsy misy tariby takiana. Mila fototr'entana goavambe ho an'ny iPad Pro 12,9-inch, na angamba i Apple dia mihevitra ny MagSafe ho rafitra ampiasana.
Miaraka amin'ny fandrosoana tonga amin'ny famahana tsy misy tariby, angamba amin'ny herintaona i Apple dia hampitombo ny herin'ny famahanana ny mpametaka azy sy ny rafitra MagSafe. Nandritra izay fotoana izay, Raha mieritreritra ny hifindra amin'ny iPad Pro vaovao ianao ho an'ny processeur M1 sy ny efijery vaovao dia mety mendrika ny hiandrasana amin'ny taona ho avy, satria tsy mahomby matetika amin'ny faminaniany i Bloomberg.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » IPad Pro miaraka amin'ny famandrihana tsy misy tariby dia ho tonga amin'ny 2022